Indlela Yokukhetha Snow lokwela - China Richina
Indlela Yokukhetha Snow lokwela
A Snow lokwela yenzelwe ukusetshenziswa emuva kwezwe Ungasingatha ezihlukahlukene imisebenzi, kodwa wokutakula ngendathane kalula umuntu owusizo kakhulu. Lesi sihloko sinikeza iqhwa-lokwela iziphakamiso ukusetshenziswa namathiphu okuthi ungawusebenzisa kanjani uyothenga eyodwa.
Ukusebenzisa i-Backcountry Snow lokwela
Isizathu esibaluleke kunazo zonke ukuba baphathe umuntu uma ngendathane. Uma ifakwe ama-transceivers ngendathane futhi iphenya kodwa ngingenalo indlela bambe isisulu, wena usesimweni esibi kakhulu.
Wonke umuntu iqembu, hhayi 1 nje noma 2, angena emuva kwezwe ebusika athwalisane lokwela. Angeke wazi ukuthi abayobe ibambeke ngendathane, futhi ufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi bonke namafosholo etholakalayo kungukuthi angcwatshwe.
Namafosholo zisetshenziselwa umbe imigodi sokunquma izimo emuva kwezwe snowpack. Okuvamise lonke uhambo, amalungu enhlangano kufanele simbe eqhweni ubone ukuthi kwenzakalani acekelwa phansi. A iqhwa emgodini ikuvumela ukunquma uma izingqimba ababuthakathaka khona-zizoyithinta ukukhulula bese uqale kushelela. Ukuze uthole olunye ulwazi cwaningo snowpack, bheka Iseluleko Richina Ltd.
A ukusetshenziswa evamile ngaphezulu iqhwa namafosholo wukuthi bevula isikhala Izinga etendeni lakho lapho iqhwa amatende noma yeqhwa ekhuphuka. Ungakwazi dweba out windscreen noma bambe endaweni ekhishini, ephelele futhi enezinto zokuhlala, uma unokuthembekele ngakho.
Mhlawumbe eyaziwa kangako ukuthi lokwela iza Ukugunda for ukumba iqhwa fresh zigcwale amanzi okuphuza. Libutha netimbonyo yakho amanzi noma izandla zakho futhi isebenza, kodwa lokhu ngokushesha uthola kuyisidina futhi abandayo.
Yiqiniso, namafosholo emuva kwezwe kungakusiza eyamba out imoto yakho ngesikhathi trailhead noma ski resort.
Ukuthenga a Snow lokwela
izici Key lapho lokwela yezitolo akutholayo ibhalansi ilungelo namandla, isisindo, isayizi blade / umumo nokubamba induduzo.
Backcountry namafosholo zenziwa ukuba kokubili oluqinile futhi engasindi:
6000-uchungechunge aluminium ngokuvamile esetshenziselwa lokwela imiphini kanye izindwani. Nakuba plastic ulula, aluminium inikeza amandla nokuqina kwayo kudingeka ukuba usetshenziselwe izimo eziphuthumayo.
Omunye design esiyingqayizivele, Eqhweni Uzipho, isebenzisa Isidlulisilwazi polyethylene (HDPE) ngakho-ke kungenziwa up iphuma futhi agcinwe ngaphakathi iphakethe lakho. Le modeli super-ukukhanya kuyinto ewusizo kakhulu iqhwa amatende kunelasemazweni yesigameko ngendathane.
Usayizi Blade noBujamo
osayizi Blade ziyahlukahluka phakathi onobuhle. izindwani Okukhulu iyindlela enhle ezihambayo iqhwa ngokushesha, kodwa bafuna ukuba namandla kakhulu futhi ucede ngokushesha. izindwani Amancane kulula ukusingatha kanye angakuvumela ukuba ehlohla ngesilinganiso ayashesha ngokuhamba isikhathi eside.
Umumo Blade nazo azifani. izindwani Flat ezikahle ngokudala bushelelezi iqhwa yomgodi izindonga; a serrated blade onqenqemeni kusiza ngokudayisa i ice.
Iningi emuva kwezwe namafosholo babe telescoping noma imiphini ihlukene for axube lula iphakethe lakho. Bona uvumelane kanye izinkinobho entwasahlobo-ukulayishwa ukuthi pop ku izimbobo izigaba yokuxhuma.
Izibambo, ngokuvamile eyenziwe ngepulasitiki ngoba isango lula, ziza ezihlukahlukene bobunjwa:
I T-isango, okuyinto isenkingeni phakathi kweminwe, kuyinto engasindi futhi isebenza kahle kubantu abaningi. Abanye bangase bakuthole kunzima lapho egqoke amagilavu ​​noma overmitts.
I-D-isango ngokuvamile bulkier futhi kancane esinzima ngokwengeziwe. It unikeza design kahle futhi ngokuvamile kulula ukuyisebenzisa nge amagilavu.
I L-isango lingaphansi ezivamile, kodwa inikeza inketho engasindi okusikhumbuza isibambo vaccuum wezindlu.
Khetha isango esifanelana kahle ezandleni zakho.
isikhathi Iposi: Aug-16-2018